Cudurro Abaaruhu Sababeen Oo Ka Dillaacay Deegaano Hoos Yimaada Gobolada Togdheer Iyo Sanaag | Berberatoday.com
Cudurro Abaaruhu Sababeen Oo Ka Dillaacay Deegaano Hoos Yimaada Gobolada Togdheer Iyo Sanaag
November 13, 2016 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Wararka naga soo gaadhaya magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo ayaa sheegaya in ay xanuuno halis ah oo ay sababeen abaaruhu ay ka dilaaceen deegaano hoos yimaadda gobolada Togdheer iyo Sanaag.
Xanuunadan oo kala ah Shuban Biyood iyo Nafaqo-daro ayaa waxa dadka ay aadka u saameeyeen kamid ah sida la sheegay caruurta yar yar iyo waliba haweenka kuwaasi oo aad ula il daran xanuunadaasi.
Warku waxa uu intaas ku darayaa in xannuunadaasi ay ilaa imika soo riteen ilaa 80 qof oo iskugu jira Carruur iyo haween isla markaana ku kala nool deegaanada hoos yimaadda Ceerigaabo iyo Burco oo ay kamid yihiin Ceel-afwayn,gar-adag,Huluul oo kamid ah gobolka sanaag iyo deegaanada Harada,Sanyare, Shansho-cadde oo kamid ah gobolka togdheer.
Deegaano badan oo kamida gobolada bariga Somaliland ayaa waxa ka jira abaaro ba’an oo saameeyey reer guuraaga deegaanada goboladaasi ku nool,taasi oo galaafatay nafaha xoolo tiro badan.
In badan oo kamdi ah dadka deegaannadaas ku nool, ayaa haatan waxa si xawli ah ugu faafaya xannuunadda shubanka iyo nafaqo-darrada u badan, waxana taas usii raaca adeegga caafimaadka oo liita, iyada oo wararku sheegayaan in xataa la waayey gaadiid dadkaas loogu soo daad gureeyo cisbtaallada magaalooyinka waaweyn ku yaalla, maadaama intooda badani ku xanuunsanayaan deegaanno miyi ah oo ka durugsan benderrada.
Gabagabadiina xukuumadda Somaliland iyo ganacsatada reer Somaliland ayaa iyaguna dhankooda dadaal xoogan ugu jira sidii ay dadkaasi abaartu ku saamaysay gobolada bariga Somaliland u gaadhsiin lahaayeen gurmad ay kaga samata baxaan abaaraha halakeeyey.